यू–१९ विश्वकप छनोट : मलेसियामाथि नेपालको सहज जित, विश्वकप पुग्ने सम्भावना कति ? | गृहपृष्ठ
Home खेल विविध यू–१९ विश्वकप छनोट : मलेसियामाथि नेपालको सहज जित, विश्वकप पुग्ने सम्भावना कति ?
on: April 15, 2019 खेल विविध
वैशाख २, काठमाडौं (अस) । सन् २०२० को यू–१९ विश्वकपको एशियाली छनोटको क्रममा मलेशिया भ्रमणमा रहेको नेपाली यू–१९ क्रिकेट टोलीले आफ्नो दोस्रो जित हात पारेको छ । सोमवार बायोमास ओभरमा घरेलु टोली मेलशियामाथि ८ विकेटको सहज जित हात पारेको नेपाल ४ अंकका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा पुगेको छ ।
मलेशियाले दिएको ९३ रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले १३ ओभरमा मात्र २ विकेट गुमाएर भेट्टायो । नेपालका लागि शुरुआती ब्याट्सम्यान रित गौतमले अविजित ३९ रनको योगदान दिए । त्यस्तै आशिफ शेखले २६ रन बनाए भने अर्का शुरुआती ब्याट्सम्यान पवन सर्राफले १९ रन जोडे । टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको मलेशियालाई ३३.५ ओभरमा ९२ रनमै समेट्ने क्रममा नेपालका पवन सर्राफ र कुशल मल्लले समान ३/३ विकेट लिए भने कमलसिंह ऐरीले २ विकेट हात पारे ।
पहिलो खेलमा सिंगापुरमाथि २१७ रनको शानदार जित निकालेको नेपालले दोस्रो खेल डीएल मेथडको आधारमा १ रनले पछि पर्दै यूएईलाई सुम्पिएको थियो । नेपालसँगको खेलमा भाग्यमानी ठहरिएको यूएईले सोमवारको खेलमा कतारमाथि जित हात पारेपछि तालिकाको शीर्ष स्थान कब्जा गरेको छ । लगातार ३ ओटा जित आफ्नो नाममा दर्ता गराएको यूएईको ६ अंक छ ।
नेपालको विश्वकप यात्रा कठिन
नेपालको विश्वकप छनोटको सम्भावना अझै जीवित छ । यद्यपी यात्रा कठिन छ । यूएईसँगको खेल गुमाएपछि धरासायी बनेको नेपालको विश्वकप यात्रा अझै कमजोर नै छ । सोमवारको खेलमा यूएईले कुवेतलाई ७ विकेटले पराजित गरेपछि नेपालको यात्रा थप कठिन बनेको हो । विश्वकपमा छनोट हुनका लागि अब नेपालले आफ्नो बाँकी दुई खेल जितेर मात्रै पुग्दैन । यूएईले पनि कुनै एक खेल हार्नुपर्ने हुन्छ । यूएईले पनि दुई खेल खेल्न बाँकी रहेको अवस्थामा सिंगापुर र ओमन दुबै टोली तुलनात्मक रुपमा कमजोर छन् । दुबै खेल जितेको अवस्थामा यूएई विश्वकपका लागि छनोट हुने छ भने यीमध्ये कुनै एक खेल गुमाएको अवस्थामा नेपाल रनरेटका आधारमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुग्नेछ भने विश्वकपको ढोका पनि खुल्नेछ ।
अब नेपालले विश्वकपमा पुग्नको लागि यूएईको हार कुर्नुको विकल्प छैन । नेपालको भाग्य चम्किनका लागि यूएईको दुर्भाग्य निम्तिनु आवश्यक छ । जसरी नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्दागर्दै पनि वर्षा र भाग्य दुबैले साथ नदिँदा हार बेहोर्नु परेको थियो, त्यसैगरी यूएईका लागि त्यस्तै नियति बनिदिएको खण्डमा नेपालको विश्वकप यात्रा सम्भव छ ।